Ahoana no hampitsaharana ny fitsiriritana ny hafa: 8 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t - An-Tsaina
Ahoana no hampitsaharana ny fitsiriritana ny hafa: 8 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t
Vitsy ny olona no miady hevitra fa ny fialonana sy ny fialonana dia zavatra tsara. Ny fihetsem-po roa tonta dia mandroba anao amin'ny fifaliana sy fifandraisana amin'ny olon-kafa satria izy ireo dia mamporisika ny fisarahana amin'ny alàlan'ny famoronana faniriana zavatra mety tsy anananao.
Ary na dia ampiasaina matetika aza ny fialonana sy ny fialonana dia tsy mitovy izy ireo.
Ny fialonana dia fihetsem-po tsapanao rehefa maniry kalitao na zavatra ananan'olon-kafa ianao. Io toetra io dia mety ho ara-tsaina, ara-panahy, na ara-batana.
Ny olona tsy sambatra dia mety hialona ny sakaizany izay toa faly sy tsy miraharaha, tsy misy ahiahy na adin-tsaina. Ny olona tsy manana famoronana dia mety mitsiriritra ny kanto kanto noforonin'ny mpanakanto iray, maniry ny hanana talenta mitovy amin'izany.
Rehefa tonga amin'ny fitsiriritana ZAVATRA , matetika manjary ambany vola. Matetika ny olona no mitsiriritra an'izay manam-bola amin'ny fiara tsara, trano tsara tarehy, na akanjo misy endrika.
Mitranga ny fialonana rehefa misy zavatra efa ananan'ny olona hafa atahorana. Ny olona iray dia mety hahatsapa ho saro-piaro amin'ny mpiara-miasa aminy mandany fotoana amin'ny namana tsara tarehy, ohatra. Matetika ny fialonana dia mitondra famadihana sy fahatezerana: 'Ahoana no nahafahan'ny malalako nanao izany tamiko !?'
Ny manavaka ny fialonana sy ny fialonana dia mety ho sarotra, tsy noho ny fampiasan'ny olona azy ireo fa noho izy ireo mpinamana matetika. Ny mpiara-miasa amam-pitiavana mifantoka amin'ny olona manintona dia mety hahatonga ny olona iray hahatsiaro ho tandindomin-doza, tsy ampy, ary tsy matoky tena, izay niavian'ny fialonana. Mety hametraka fanontaniana toy ny hoe: “Fa maninona aho no tsy mijery tsara kokoa? Fa maninona aho no tsy afaka manao charismatika kokoa? '
Io fanehoan-kevitra io dia momba ny fifandraisan'ny olona amin'ny tenany fa tsy ny fihetsiky ny mpiara-miasa aminy. Ny olona azo antoka amin'ny fifandraisany dia tsy voatery ho nanana karazana eritreritra toy izany.
Ny fialonana sy ny fialonana dia misy poizina amin'ny fifandraisana sy fiadanan-tsaina. Horavan'izy ireo izay rehetra kasainy. Ny vaovao tsara dia afaka miasa izy ireo! Ny fitsiriritana matetika no fototry ny fialonana, koa hifantoka amin'ny fomba hampiatoana ny fialonana amin'ny hafa isika.
Andao hijery torohevitra vitsivitsy.
1. Mampihatra fankasitrahana.
Ny fankasitrahana dia fitaovana matanjaka tokoa amin'ny fambolena fanekena am-pitiavana ny tena sy ny fiainana.
Ny fitsiriritana dia matetika miorim-paka amin'ny faniriana bebe kokoa, maniry ireo zavatra tsy ananantsika. Arakaraka ny andaniantsika fotoana ifantohana amin'ny zavatra tsy ananantsika sy izay tadiavintsika no hampihena ny fotoana lanintsika amin'ny fampiharana ny fankasitrahana tsotra noho ireo zavatra ataontsika.
Midika zavatra hafa amin'ny olona samihafa izany.
Ny olona sasany dia efa manana zavatra sy toetra be dia be nefa mitsiriritra ireo manana bebe kokoa. Ireo olona ireo dia mila mijanona fotsiny mba tena hankasitraka ny soa rehetra efa misy eo amin'ny fiainany.
Fa ahoana kosa rehefa sahirana amin'ny fiainana? Eny, izany no fotoana ilantsika fankasitrahana indrindra.
“Ahoana no hataoko ho feno fankasitrahana rehefa be ny olana mahazo ahy?” Mba hanaovana izany dia manampy amin'ny fijerena ireo zavatra anananao na tsy lavorary aza izy ireo.
Mety ho eo amin'ny tongony farany ny fiaranao fa mampitondra anao hatrany A ka hatramin'ny B, ny namanao dia mety tsy olona lehibe indrindra nefa manome fiarahana, vary sy tsaramaso efa antitra rehefa elaela nefa feno ny kibonao.
Ary mbola eto ianao, mbola afaka miasa amin'ny zavatra tsara kokoa amin'ny fiainanao - zavatra tokony hankasitrahana foana izany.
ny fomba handratrana olona narcissistic
Raha vantany vao mahita fankasitrahana ianao dia hanana fitaovana tsy mampino amin'ny fandotoana ny fahatsapanao ratsy, na ambany toy inona ianao.
2. Atsaharo ny fampitahana ny fiainanao amin'ny hafa.
Talohan'izay dia nanome ohatra vitsivitsy amin'ny fialonana izahay - olona tsy faly mitsiriritra olona faly, olona tsy mahatsapa famoronana mitsiriritra ny mpanakanto, ary olona tsy manam-bola mitsiriritra olona manam-bola.
Ny zava-misy, ireo fampitahana ireo dia mahalana vao maneho ny tena marina sy feno ny zava-misy.
Ny olona mandehandeha mitsiky miaraka amin'ny tarehiny dia tsy midika hoe faly izy ireo. Tsy dia tsotra ny olona. Midika izany fa te-hamolavola sary momba ny fahatsapana sy ny fahasambarana amin'izao tontolo izao izy ireo.
Olona ory marobe no mahay ara-tsosialy ary miahy manokana hanarontsarona ny fanaintainany amin'ny tsiky. Tsy fantatrao izay ao ambadiky ny tsikin'ity olona ity.
Hafahafa ny hoe mahay mamorona. Lazain'ny olona aminao matetika fa maniry izy ireo hanana ny talenta na ny fahaiza-manao nefa tsy miraharaha anao foana rehefa milaza aminy ianao fa tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra izany dia vokatry ny asa mafy sy fampiharana be dia be.
Na iza na iza dia mety ho mamorona raha toa ka nanokana fotoana tena hanaiky ny fahalianana amin'ny famoronana ary hiasa amin'ny fampivelarana ny fahaiza-manao. Ary tsy voafetra ho an'ny fanoratana, sary, na fandokoana fotsiny izany! Izy io koa dia ahitana zavatra toy ny masinina maotera tsara, izay ampiasain'ny ampahany tsirairay tsara ny tanjony satria misy olona mahay amin'ny isa namolavola azy ho toy izany.
Ny vola dia sarotra. Amin'ny ankapobeny dia miaraka amina marika fanampiny mifamatotra ao aminy, mazàna amin'ny endrika asa mafy na fandoavana zanabola amin'ny zavatra novidina tamim-bola.
Efa nandre momba ny 'rojo vy volamena?' Izany dia rehefa mahazo asa be karama ianao, mividy trano manja, fiara tsara, ary mamorona fomba fiainana mitaky anao hanao toy izany koa, raha tsy mihoatra. Voasambotra an'io asa io ianao izao mba hitazomana ny fomba fiainanao, na tianao na tsia, raha tsy te-hampiakatra tanteraka ny fiainanao ianao.
Aza mampitaha ny fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa mihitsy. Tsy azonao atao mihitsy ny mahalala hoe inona no entin'izy ireo na sorona hananany izay ananany.
3. Aza mandany fotoana bebe kokoa amin'ny olona mitsiriritra.
Ireo olona andanianao fotoana dia manana fitaomana lehibe amin'ny zavatra mahaliana anao, ny zavatra tianao ary ny fanirianao.
Eritrereto hoe mihantona amin'ny olona mifaninana foana ianao. Amin'izany dia ho hitanao fa tafiditra an'io fifaninanana io ianao. Anisan'izany ny fialonana.
Ny olon-kafa no ratsy indrindra amin'ny fanamorana sy fampiorenana ireo fahatsapana ratsy ireo. “Mila manana trano tsara kokoa ianao! Fiara lafo vidy kokoa! Akanjo tsara kokoa! Tsy maintsy porofoinao amin'ireo olona hafa ireo fa azonao izany! '
Fa maninona Ny olona tokana tena miahy dia olona hafa amin'io fifaninanana io ihany. Ka maninona na dia manelingelina ny fiarahana amin'ireo olona ireo aza fa ny zavatra tsy maintsy hataonao fotsiny dia ny famahanana ny tsy fandriam-pahalemanao, mahatonga anao hahatsapa ho tsy ampy fahaizana, ary hahatonga anao hahatsapa fa mila mifaninana.
Araho maso ny faribolanao akaiky indrindra. Aza mandany fotoana bebe kokoa miaraka amin'ireo olona izay eo amin'ity fitoeran-jiro tsy misy farany ity.
4. Mianara mankalaza ny fahombiazan'ny hafa.
Fomba tsotra iray hampihenana ny fitsiriritana ny fahitana fahasambarana marina amin'ny fahombiazan'ny olon-kafa.
Tsy mila fifaninanana ny fiainana. Ny hoe satria misy mandresy dia tsy voatery hidika hoe resy ianao. Ary na dia resy aza ianao dia misy foana ny fotoana bebe kokoa hiasana mankany amin'izay tianao ary hahita ny fahombiazanao.
Aza mifantoka amin'izay tsapanao fa mendrika olona na tsy mendrika azy. Aleo mifantoka amin'ny fifalian'izy ireo fotsiny, mitsikia mamirapiratra, ary mankalazà miaraka amin'izy ireo.
Ny tsiky dia manatsara ny toetrantsika amin'ny alàlan'ny fanentanana ny famokarana endorphin, amin'izay ianao afaka manandrana manangana rohy misy eo amin'ny traikefa tsara sy ny fahasambarana amin'izany.
5. Azavao tsara izay tena mahasarika anao.
Ampiasao ny fitsiriritanao ho loharanon'ny fitarihana hahafantarana tsara kokoa izay tena tianao hotratrarina.
Lazao fa mitsiriritra an'i Sue mpiara-miasa aminao ianao satria toa matoky tena foana izy. Saingy rehefa mijery akaiky kokoa ianao, ny zavatra tena irinao ho azonao atao toa azy dia apetraka amin'ny fampisehoana mahomby sy mahomby amin'ny lehibenao na ny mpanjifanao. Izy io dia misy ifandraisany betsaka amin'ny drafitra, fampiharana ary fahazoana hevitra avy amin'ny hafa toy ny fahatokisany azy.
Na mety hitsiriritra an'i Chris namanao ianao satria mipetraka amin'ny trano lehibe amin'ny faritra mahafinaritra izy. Na izany aza, rehefa mandinika an'io fitsiriritana io ianao dia ny fomba fiaina ananan'ny trano azy no tadiavinao. Angamba nahazo fitsangantsanganana eny ambanivohitra eo am-baravarana io na tsara ho an'ny vahiny voly. Mety ho hitanao ireo zavatra ireo ihany miaraka amin'ny trano kely kokoa izay azonao atao.
Miezaha manala ilay olona amin'ilay fampitahana ary manaova manokana momba ireo zavatra na kalitao irinao hananana anao.
6. Miezaha hanatsara ny tenanao sy ny fiainanao.
Manokana fotoana sy hery ampy ve ianao amin'ny fananganana ny fiainana tadiavinao? Sarotra ny mahita ny fotoana tokony ho ao amin'ny orinasan'olon-kafa rehefa mifantoka amin'ny zavatra tokony hataonao ho anao ianao, hahazoana izay tianao amin'ny fiainana.
Raha manam-potoana hitsiriritana ianao, dia azo antoka fa manam-potoana hiasana amin'ny ampahany amin'ny tenanao izay mahatonga anao hahatsapa ho tsy matoky tena sy fialonana amin'ny hafa.
Misy fomba maro ahafahanao mandeha amin'izany. Mety mila fitsaboana ianao hiatrehana ireo olana izay mipoitra manodidina ny tsy fahatokisanao.
Angamba resaka fiovan'ny fomba fiainana tadiavinao io. Asa hafa angamba? Sa hiverina any amin'ny oniversite hahazoana asa tsara kokoa? Mihinana fahasalamana? Fanatanjahan-tena bebe kokoa?
Na inona izany na inona, ataovy. Manaova drafitra, mametraha tanjona, tadiavo ny antony manosika anao hanova ny fiainanao amin'ny fomba tianao.
7. Aza mihinana haino aman-jery sy haino aman-jery sosialy.
Mamorona fomba fijery tsy azo tanterahina betsaka momba ny fiainana ny media. Tsy ny marketing sy ny doka ihany no manao azy. Seho fahitalavitra be dia be no mamorona fanantenana tsy azo tanterahina amin'ny asa, lalao ary fifandraisana izay mety horaisin'ny olona tsy za-draharaha ho fahamarinana.
Ny iray amin'ireo tropika mahazatra indrindra dia ny fananana namana marobe izay mivory matetika ny rehetra. Raha ny tena izy, sahirana ny fiainana. Manana fianakaviana, asa ary andraikitra ny olona. Mihasarotra ny fihazonana ny fifandraisana satria ny roa tonta dia mila manokana fotoana sy hery hitazomana izany fifandraisana izany ho velona.
Tsy tsara noho izany ny marketing sy ny dokam-barotra. FOMO, na 'Fahatahorana tsy ho very', dia fomba iray mahazatra hampiroboroboana ny faniriana sy ny hamehana.
“Mila an'ity ianao! Jereo ny hafalian'ireo olona rehetra ireo! Tsy te ho sambatra ve ianao? Vidio ny vokatray sy / na ny serivisy! Ity no zavatra farany farany, lehibe indrindra, vaovao, mafana indrindra! '
Fomba iray hampiasan'ny mpivarotra ny ego-nao sy ny tsy fahatokisan-tena aminao.
Ary ny media sosialy dia mazàna soritr'aretina manara-penitra voamarina tsara amin'ny fiainan'ny olona iray. Vitsy ny olona mandefa momba izay tsy ananany na tsy mandeha tsara ny fiainany.
Ary ireo izay manao, eny, sarotra indraindray ny mandray am-po ireo olona ireo. Mety ho izy ireo ilay karazana mirotsaka an-tsehatra amin'ny tantara an-tsehatra ataony manokana na tsy mahay ara-piaraha-monina ka tsy mahatsapa fa hevitra ratsy ny manasa ny lamba malotony amin'ny sehatra ampahibemaso.
Ny haino aman-jery kely kokoa dia mazàna amin'ny tambajotra tsara, na dia misy loharano manatsara kalitao any aza hanampiana anao hahita ny lalanao amin'ny alàlan'ny olana manokana.
8. Aza miaina amin'ny fifaninanana ny fiainanao.
Ny fiainana no anaovanao azy. Raha avadinao ho fifaninanana dia fifaninanana io.
Tsy mila mifaninana amin'ny olon-kafa ankoatry ny tenanao ianao mba ho olona tsara kokoa noho ny omaly.
Ary, raha ny tena izy, na dia afaka mianina amin'ny anananao aza ianao, dia tsy voatery ho marina ny milaza na mieritreritra fa milamina toa antsika ihany isika. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia lasa fisainana misy poizina izay mahatonga ny olona hijanona rehefa mbola mitombo ny ataony.
Fa kosa, te-handinika ireo faritra samihafa amin'ny fiainanao ianao. Aiza no ahitanao fifaliana? Tsy faly? Inona no tianao hatsaraina? Ary ny tena zava-dehibe - maninona no te hivoatra?
Aza adino: natao ho anao io satria mendrika ny hiasa amin'ny karazan'olona tadiavinao ianao fa tsy hifaninana amin'ny olon-kafa.
Ny fifaninanana dia mety amin'ny fatra voafetra sy voafehy. Fa raha hitanao fa miady amin'ny fitsiriritana izay ananan'ny olon-kafa ianao dia azonao atao ny manaisotra ireo fahatsapana fahefany amin'ny tsy filalaovana izany lalao izany fotsiny.
Aza adino fa miasa amin'ny tanjonao manokana ianao. Tsy maninona ny fandrefesanao ny olon-kafa, na inona na inona tian'ny olon-kafa hampahatsapa anao.
Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainanao ara-tsaina ve ny fialonana? Mbola tsy azonao antoka ny fomba hiatrehana izany? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fomba hampitsaharana ny fampitahana ny tenanao amin'ny hafa
Ahoana no hianina amin'izay anananao amin'ny fiainana: tsy misy toro-hevitra 5 tsy misy toro-hevitra!
16 Zavatra tsy vidina vola (tsy maninona ianao manankarena)
Ahoana ny fomba ireharehana ny tenanao: 8 Tsy misy toro-hevitra momba izany!
Antony 7 hiovàna amin'ny toe-tsaina tsy fahampiana amin'ny toe-tsaina be dia be
ahoana no ahitako hoe iza aho
Antony 13 antony itiavako anao
rehefa mandao anao ny namanao